जातीय आधारमा आरक्षण किन? | Jwala Sandesh
मिलन देवकोटा | प्रकाशित मितिः बुधबार, असार ९, २०७८ ::: 215 पटक पढिएको |
कथित तल्लो जातको मानिस भएकाले एक युवतीले काठमाडौंमा कोठा नपाएको घटना समाचारमा प्रकाशित भयो। उनीप्रति सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया आए। सायद त्यही साथ र समर्थनको आडमा हौसिएर हुनुपर्छ, उनले आफूलाई भेदभाव गर्ने घरबेटीविरूद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन्।
अन्ततः आरोपितलाई पक्राउ गरियो।
ती युवतीलाई विभेदको घटना बाहिर ल्याएको र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थालेकामा सबै मानिसहरूले वाहवाही भने गरेनन्। कतिपयले सोही घटनालाई लिएर फरक खाले अनपेक्षित जवाफ पनि दिए। केही मानिसले लेखेका छन्- कोठा नपाउने विश्वकर्मा, कोठा नदिने नेवार अनि गाली खाने चाहिँ बाहुन ? अन्य केहीले लेखेका छन्- आफ्नो घरमा कसलाई कोठा दिने वा कसलाई नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार घरबेटीलाई हुन्न र ?
विषयान्तर गर्दै केही व्यक्तिले लेखेका छन्- तिमीले दलित भएका कारण कोठा पाइनौ, हामीले बाहुनक्षेत्री भएका कारण सरकारी जागिरमा कोटा पाएनौं। आखिर विभेद कहाँ छैन र ?
यसमा थप्दै अरूले लेखेका छन्- जातको आधारमा आरक्षण पाउने प्रणाली रहेसम्म दलितमाथि भेदभाव भइरहने छ। समान हैसियत प्राप्तीका लागि दलितले सरकारी आरक्षण त्याग्नुपर्छ। राज्यले जातको आधारमा आरक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्तै भिन्नभिन्न विचार पढेर जातिगत आरक्षणसँग सम्बन्धी सवालको चर्चा यो लेखमा गरेकी छु।
आरक्षित कोटामा ‘इलाइट क्याप्चरिङ’ भएको कुरा पनि केही हदसम्म सत्य हो।
‘निश्चित जातलाई तोकेर आरक्षण दिनु हुन्न, आरक्षणको आधार आर्थिक अवस्थालाई बनाइनुपर्छ’ भन्ने मागहरू पनि उठेका छन्।
‘शिक्षामा लगानी छैन, जागिर मात्रै खा भनेर लक्षित वर्गले कसरी पाउन सक्छन्?’ भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो छ।
‘आरक्षणको अवधि कहिलेसम्म?’ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।
हो, अझै पनि आरक्षण प्रणालीसम्बन्धी वा अन्य विषयमा हाम्रा केही विमति, प्रश्न र गुनासा होलान्। तर ती सवालको सम्बोधन एकतर्फी रूपमा व्यक्त हुने घृणा, लाञ्छना र आरोपयुक्त शब्दमा भेटिने छैन। त्यसैले आउनुहोस्- तर्क र तथ्यमा टेकेर खुला बहस गरौं। बहसबाट तार्किक निचोडमा पुगौं। सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी लोकतन्त्रलाई सबै मिलेर सफल पारौं। सेताेपाटीबाट साभार गरिएकाे ।